AUKEY EP-T10 Key Series TWS Earbuds with Sweat and Water Resistant and – Gadget Pro Myanmar
Product SKU: AUKEY EP-T10
Charging Case ကို Wireless အားသှငျးနိုငျမှာဖွဈသလို Type-C port ဖွငျ့လညျး အားသှငျးနိုငျပါတယျ။
IPX5 ပါဝငျလို့ ရစေိုမှာ၊ ခြှေးစိုမှာလညျး ကွောကျစရာမလိုတော့ပါဘူး။
နားထဲက အလှယျတကူ ပွုတျကမြသှားနိုငျတဲ့အတှကျ Dancing လုပျရငျးဖွဈဖွဈ၊ Gym အပွငျးအထနျဆော့ရငျးဖွဈဖွဈ နားထောငျနိုငျတာကွောငျ့ Mood အပွညျ့နဲ့ လကေ့ငျြ့နိုငျမှာပါနျော။
နောကျထပျထူးခွားခကျြတဈခုက Earbuds မှာ ခလုတျတဈခုမှ မပါ ပါဘူး။ . . . ဟုတျပါတယျ။ Earbuds ဘေးမှာပါတဲ့ သော့ပုံစံနရောလေးကို ထိတှေ့ ရုံနဲ့ မိမိလိုခငျြတဲ့ ထိနျးခြုပျမှုတှကေို လုပျဆောငျနိုငျမှာပါနျော . . . လနျးတယျဟုတျ . . . အဲ့ သော့ သင်ျကတေလေးကပဲ AUKEY ရဲ့ Premium Key Series တှကေို ကိုယျစားပွုပေးတယျဆိုရငျ မမှားပါဘူး။
Charging Case ကို Wireless အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်သလို Type-C port ဖြင့်လည်း အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
IPX5 ပါဝင်လို့ ရေစိုမှာ၊ ချွေးစိုမှာလည်း ကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
နားထဲက အလွယ်တကူ ပြုတ်ကျမသွားနိုင်တဲ့အတွက် Dancing လုပ်ရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ Gym အပြင်းအထန်ဆော့ရင်းဖြစ်ဖြစ် နားထောင်နိုင်တာကြောင့် Mood အပြည့်နဲ့ လေ့ကျင့်နိုင်မှာပါနော်။
နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုက Earbuds မှာ ခလုတ်တစ်ခုမှ မပါ ပါဘူး။ . . . ဟုတ်ပါတယ်။ Earbuds ဘေးမှာပါတဲ့ သော့ပုံစံနေရာလေးကို ထိတွေ့ ရုံနဲ့ မိမိလိုချင်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါနော် . . . လန်းတယ်ဟုတ် . . . အဲ့ သော့ သင်္ကေတလေးကပဲ AUKEY ရဲ့ Premium Key Series တွေကို ကိုယ်စားပြုပေးတယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
ပေးရတဲ့ စြေးထကျ တနျတဲ့ နားကပျြလေးပါ။ Design လေးလညျး အရမျး သဘောကပြါတယျ။
Very Nice to use. Love it.